पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कुनै सुविधा लिन्नँ : निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं। निवर्तमान गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कुनै सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। नवगठित प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन कानून बनाउने तयारी गरिरहेको बेला निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। “संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्छु। सरकारले जनताको सुविधामा ध्यान देओस्। पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कुनै सुविधा लिन्नँ”, उनले भने।
कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुनुभएको छ । विश्वासको मत पाउन असफल भएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएर कामचलाउ सरकारको प्रमुख बन्नुभएको छ । आजको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकोमा पक्षमा २७ मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो । ६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । मतपरिणाम सुनाउँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पक्षमा २७, विपक्षमा ३० र एक जना मतदानमा सहभागी...
गण्डकी प्रदेशः मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत
काठमाडौं / गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका उनकाे पक्षमा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत खसेको छ । अब संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । The post गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त appeared first on Purbeli News.
Purbeli News 11 दिन पहिले
पोखरा । एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा उनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यससँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त बनेका छन् ।गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विहीबार विश्वासको मत लिन प्रयास गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ मत मात्र परेको थियो भने विपक्षमा ३० मत परेको थियो । सभामुखसहित ६० सदस्य र
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङ्गलाई पद जोगाउन मुश्किल, एमालेबाटै फ्लोर क्रसको सम्भावना
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङ्गको सत्ता टिक्ला ? यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित
काठमाडौं: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू अल्पमतमा नरहेको बताएका छन्। प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै गुरुङले आफू अल्पमतमा नपर्ने दाबी गरे। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) भित्रको विवादका कारण प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने राजनीतिक आँकलनबीच मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रस्ताव आए ढुक्कसँग सामना गर्ने बताए। प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेश सभा…
बहुमत पाउन नसकेका दलका लागि चुनाव नयाँ अवसर हो: मुख्यमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै उनले लोकतन्त्रमा संकट आयो भने जनतामा जाने पद्धति रहेको बताउँदै पार्टीभित्रै पदको सौदावाजी गर्न नहुने उल्लेख गरे । सांसद खरिद बिक्री गरेर फेरि अर्को सरकार बनाउने फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा जनतामा जानु राम्रो रहेको उनको भनाई छ ।प्रदेशसभामा बोल्ने प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रह
प्रचण्ड-माधव समूहका मन्त्रीलाई हटाउँदिनँ : मुख्यमन्त्री गुरुङ
१५ पुस, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रचण्ड-माधव समूहका मन्त्रीहरुलाई नहटाउने बताएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा फुट आएसँगै प्रदेश सरकारहरु मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र मन्त्रीहरु हटाउने होड देखिएको छ । तर गण्डकीमा प्रचण्ड माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छैन भने ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले अर्को समूहका मन्त्रीहरुलाई हटाएका […]